Madagasikara von John Cunningham, Elaine Cunningham. Bücher | Orell Füssli
Ilay Nosy any amin'ny Faran'ny Tany
Ity boky ity dia mitantara ireo dingana voalohany tamin'ny fanorenana ny Fiangonan'ny Nazareana. Mijoro vavolombelona momba ny fomba mazava sy malalaka ny fitarihan'Andriamanitra. Diapenina nokalian'i John sy ny reniny, mahavariana ny mamaky azy. Mampahafantatra mikasika ny antson'ny misionera amin'ny fiaraha-monina misy ankehitriny. Mijoro vavolombelona ny amin'ny maha- matoky ny olon'Andriamanitra. Mamela antsika ahalala ny fandehan'ny iraka amin'izao vaninandro moderina izao. Tsy misy amin'izay mamaky ity boky ity no hiala amin'ny fitiavana sy hazavana niainan'ireo izay manambara fa manana fahafahana ho an'Andriamanitra. Ny fitiavana, ny vesatra ho an'ny hafa, ary ny hetaheta te hikarakara rehefa mitondra ny Filazantsara, dia mampisy aingam-panahy ary mandrisika tokoa. Rehefa voavakinao ity boky ity, dia hanana faniriana te ho ampiasain'Andriamanitra ianao, ary hanana fahatsapana sy vesatra lalina hivavaka ho an'ireo miroso amin'izany asa izany.